केन्द्र खारेजी प्रति कांग्रेस तनहुँ आन्दोलित – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार २०७५, १० माघ बिहीबार १४:५६
तनहुँ , माघ १० गते । सरकारले तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बेलचौतारा स्थित गिरीजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र खारेज गर्ने लागेको भन्दै तनहुँ काँग्रेस आन्दोलित भएको छ ।
नेपाल काँग्रेस तनहुँको आयोजनामा दमौलीमा बिहिबार दिउँसो आन्दोलन गरिएको छ । आन्दोलनकारीले एक घण्टा पृथ्वीराज मार्ग अबरुद्ध पारेका थिए । यातायता बन्द हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेका थिए । आन्दोलन कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरीता गुरुङले पूर्वाग्राही भएर सरकारले खारेजी गर्न चाहेको आरोप लगाउनु भयो ।
काँग्रेसले सुरुवात गरेको राम्रो काम पनि विभिन्न वाहानामा राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर बन्द गर्न खोजिएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस शुक्लागण्डकी नगर समितिका सभापति माधव भट्टराई , नेविसङ्घ तनहुँका अध्यक्ष चुणामणी खनाल लगायतले केन्द्रको खारेजी गर्ने निर्णय गरेर नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष गिरीजाप्रसाद कोईरालाको नामबाट स्थापित सो केन्द खारेजी गर्ने काम भनेको नेता कोईरालको घोर अपमान भएको आरोप लगाउनु भयो ।
उपचार केन्द्रलाई सङ्घीय सरकारले संचालन गर्ने सूचीबाट हटाउन खोजिएकोले आन्दोलन गर्नु परेको नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँले जनाएको छ । सरकारले सो निर्णयलाई तत्काल नसच्याए कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आन्दोलनको आधिवेरी ल्याउने चेतावनी कांग्रेस तनहुँका कार्यबाहक सभापती जितप्रकाश आलेले दिनु भयो । आन्दोलनको क्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिका १ र ५ मा माघ ७ गते विरोध जुलुस र कोण सभा गरिसकेको छ । माघ ८ गते सोही नगरपालिका वडा नं. ४, ५, ६ र ७ मा साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभए थप आन्दोलन चर्काउने कांग्रेस तनहुँले जनाएको छ ।
जिपि कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रस्वास उपचार केन्द्र झरौटालाई संघ मातहतमा सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्णय प्रति शुक्लागण्डकी नागरिक समाजले दुख ब्यक्त गरेको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर ५ मा उपचार केन्द्रले तनहुँको विकासमा आशा उब्जिएको बेला यो निर्णय नागरिकहरुमा निराशा छाएको भन्दै दुख ब्यक्त गरेको हो ।
गत पुस २२ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरलाको नाममा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पतालको सञ्चालक समिति गठन नगरि खारेजी प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले केन्द्र सरकार अन्र्तगत स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरि निर्माणाधिन ११ वटा अस्पतालको सञ्चालक समिति गठनका लागि भएको सिफारिस मध्ये ९ वटालाई मात्र स्वीकृत गरेको थियो ।
देशका ११ स्थानमा बन्ने अस्पताल मध्ये तनहुँको यस अस्पतालर नेपालगञ्जको बाँकेमा बन्न लागेको क्यान्सर अस्पतालको लागि समिति गठन गर्न रिफारिस अस्विकृत भएको छ । बाँकेमा निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको क्यान्सर अस्पताल समेत काँग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको नाममा रहेको छ । सरकारको यस कदम काँग्रेस विरुद्धको ठाडो प्रहार भएको भन्दै काँग्रेस नेताहरु सरकारको यो कार्य सैह्य नभएको प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् । माघ ६ गते नेपाली काँग्रेस तनहुँले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेपालीका काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुरले केन्द्र खारेजीको निर्णय नसञ्चाए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
नागरिक समाजद्धारा दुःख व्यक्त
अस्पताल बिघटन हुने निणय प्रति शुक्लागण्डकीका नागरिक समाज दुःखित भएका छन् । बुधबार उक्त उपचार केन्द्रमा नागरीक समाज, पत्रकार सहित हस्पिटलका व्यवस्थापकसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपचार केन्द्र बिघटनमा गएको प्रति नागरीक समाजले दुख व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगगिरक समाजका अध्यक्ष खेमराज खनालले यस विघटनको निर्णयले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्ने सपना देखेका यहाँका नागरीकको सपना टुक्रिएको बताउनु भयो । उपचार केन्द्र एउटा पार्टीको मात्र नभएर समग्र जनताको भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले तनहुँ जिल्लाको धरोहरको रुपमा रहेको यस अस्पताल बिघटन गर्न नहुने बताउनु भयो ।
यस्तै कार्यक्रममा केन्द्रका प्रमुख डा. रामकुमार श्रेष्ठले सरकारको उक्त निर्णयले अस्पतालमा असर पारेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरुपनि अस्पताल खारेजको निर्णयपछि उपचारका लागि हतारिएर आउन थालेको जानकारी दिनु भयो ।
बच्चा बोकेकी महिलालाई लाठी हान्ने इन्स्पेक्टरमाथि छानविन
२०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार २०:५०
राष्ट्रिय जनमोर्चा एमाले–माओवादीसँग एकता गर्न जाँदैन् : केसी
२०७५, ९ बैशाख आईतवार १२:५२
गान्धीकाे जन्म जयन्तीका अवसरमा ४१ एम्बुलेन्स र ६ बस उपहार
२०७७, १६ आश्विन शुक्रबार २१:२६
माओवादी केन्द्र सँग पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छैन चुनाबी तालमेल मात्र हो : झलनाथ खनाल
२०७५, २ बैशाख आईतवार १२:१९
मुस्लिम समुदायले आज इदुलफित्र पर्व मनाउदै